Ukunyaniseka kwabantwana kunye nesondlo esifanelekileyo
Ukugqithisa isifo esibi kwaye sisasazeka. Kubandakanya abantwana. Ukunyaniseka kwabantwana kunye nesondlo esifanelekileyo kukukhathazeka kubazali abaninzi. Le ngxaki ayikho ngokwayo. Ukunyanyisa kubangela ukwanda kweenombolo zexinzelelo lwegazi kubantwana. Sekuqaleni kweyesihlanu ukuya kwibanga lesithandathu, oogqirha bajongene nale meko ngabo bafundi abathathu.
Unyaka ngamnye ugqirha wesikolo uqhuba bonke abafundi be-anthropometry. Eli gama elihle liqondwa njengokulinganisa ukukhula nokulinganisa komntu. Kwaye ke, ngokwemimiselo, kufuneka ubale isibalo sobunzima bomzimba. Ifomula ilula: umlinganiselo wesisindo somzimba (kg) nganye kwesikwere sokuphakama kwimitha (m 2 ). Kwaye kaninzi kubantwana bethu sidibana kunye nokugqithiseka kwesi sahluko. Kwaye ngaphandle kwesiqulatho kuyaziwa ukuba ngaphaya kweqela elincinane labantwana elithambekele ekuzaleni kunye neyona nxalenye ye-fatties yangempela.
Ekufuphi kukho enye ingxaki enkulu - kukuqhayisa. Ngesizathu esithile, kukho uluvo lokuba oku, kunoko, ukugula kwabantu abadala. Kodwa sinokuthi ngokukhuselekileyo-namhlanje ngokuqhelekileyo yintlungu yomntwana. Kukho iinkcazo ezininzi zezi zinto - ukutshabalala kwabantwana kwi-buns, i-sandwiches, i-smazhenkam, i-pizza. Ukutya okungalunganga ngokubanzi, xa ukutya ukutya kwegbohydrate kwamukelwa kwintsapho - i-predominance ye macaroni kunye neetatata kwimenyu. Umsebenzi omzimba ongaphantsi, uhambo olungabonakaliyo nolutshane oluhambayo lwabantwana. Kwaye enye imeko ephosakeleyo: bethu abantwana baphoqeleka ukususela ebuntwaneni ukuba bagcine umyalelo othile-ukunyamezela i-call to break. Ngokuqhelekileyo, zonke iimeko zokuphuhliswa kwengcinezelo eqhubekayo kubantwana zikhoyo.
Ukubambisana akubi kwaye kuyingozi kwimpilo. Kodwa ingxaki iyancipha ngakumbi - ngenxa yokungcola emathunjini kukho ukunweba kwamathumbu amakhulu, i-calomization ikhula. Oomama abaninzi abavumi ukuvuma ukuba le ngxaki yonyango, bacinga ukuba imfundo ayifundanga umntwana ukuba amlandele, ukuba acaphele. Kwabaninzi abantwana ngisho nangeminyaka eyi-12 ukuya kweye-13 ukuya kweye-13 kuya kwenzeka ukuba ihlazo lenzekile. Ukuba ubuza ngendlela enhle, abantwana abaninzi baya kukuxelela ukuba nangemva kokuba isilwane sichithwe, basenomqondo wokuba bunzima kunye "neshishini" elingaphelelanga. EUnited States, baqhuba isifundo baza bafumanisa ukuba inani labemi belizwe lichitha ngaphezu kweebhiliyoni eziligidi ngonyaka ukuthenga amayeza. Kule mivuzo, izigidi ezili-150 zithatha unyango lokubanjwa. Kule meko, oogqirha abaqinisekanga ngokuqinisekileyo: ukusetyenziswa rhoqo kwama-laxatives kunye ne-enemas kuqalise umjikelo ongeyingozi xa intlungu iphela ukusebenza.
Ukunyanga kokunyanya, kuquka nabantwana, kunzima kakhulu. Okokuqala, kufuneka uqulunqe isondlo esifanelekileyo, kwaye oku kunzima. Ingxaki ebalulekileyo isondlo sezilwanyana. Kwintando yokutya okulungileyo kudla ngokunyuka imveliso ye-insulin kwaye ngexesha elifanayo ukunciphisa ubukhulu beeseli. Ngoko ke, amaseli omzimba onke ahlala elambile, ndifuna ukutya kwakhona. Kwaye kunzima ukuba abazali banqabe umntwana ekudleni!
Ngoko, ukukhuluphala, ukumbumba, ukunyuka kwengcinezelo yegazi kunye ne-high cholesterol yegazi kwanabantwana bahamba namhlanje ecaleni. Izigulane zabantu abadala abanezifo ezininzi kulo mzekelo abakwazi ukwenza ngaphandle kokuhlolwa ngokuthe ngqo kunye nokunyango oluchanekileyo. Abantwana abathambekele ekuzaleni kunye nokuqhawulwa bangazama iindlela ezahlukeneyo. AmaMommies ahlutha abantwana bacebisa ukuba banakekele ingondlo efanele. I-bran bran kufuneka ijojowe ekudleni kwabantwana kaninzi. Iyintoni ibhanki yokutya? Ngokuqhelekileyo yinto enengqolowa yeengqolowa, apho kufakwa khona amajikijolo adibeneyo, amaqhekeza, iincinci, iintlobo zemifuno. Esesiswini, zizalisa, zizalise, zidale ukuvakalelwa. I-Bran iyancancisa izihlalo, zibanceda ukuba ziphume emzimbeni. Ngendlela, i-bran inegalelo ekukhutshweni kwe-cholesterol engaphezulu, ukuphucula ukuhlukana kwe-bile. Konke oku kungqina kwezesayensi! Xa ufaka i-bran ekudleni, isondlo sinciphisa ngokuphawulekayo, kwaye kungekudala ukuzaliswa kwe-saturation kuqala.
Emva kwenyanga yokuthatha umthamo omdala - ama-5-6 wezipuni ngosuku - abantu, umzekelo, ukuphucula umsebenzi wegciwane lesisu. Ukuguquka komlilo kulahlekile, ubunzima obunzima bunqatshelwe. Abantwana banganikwa ibhanki ezincinane kakhulu. Kwaye kusengaphambili kuyimfuneko ukubonisana nogqirha. Kwaye akusiyo yonke into - inomdla ukuba ebunjini yamathumbu kubangela ukubunjwa kobunqamlezo obunamandla. Kutheni? I-Slime isebenza njenge-antiulcer ephawulekayo, ikhusela iindonga zangaphakathi zendlela yokugaya inyama kwiinkampani ezininzi ezinobundlobongela. Ukuthatha i-bran, kunokwenzeka ukujamelana nesimo esinye esingathandekiyo - reflux, okanye ukuyeka ukuphonsa ukutya ukusuka esiswini ukuya kwi-esophagus nase-duodenum ukuya kwisisu. Ukukhangela oku kubangelwa yinto engathandekiyo njengento yokuziphatha.
Kunconywa ukuba uqalise i-bran kwimenyu yakho kubantu abaphilileyo. Ndiyavuma, asidli 800 amagremu yemifuno kunye nemifuno ekhuthazwa oogqirha bezondlo ngosuku (oku kungabandakanyi iizambatho). Oku kuthetha ukuba asifumani i-fiber efanelekileyo yokutya, ubukho obuchaphazela ngqo inkqubo yokutya. Ukuphakanyiswa kokukhawuleza kokutya kwi-colon kuyayithanda kakhulu. Kwaye, nangona kunjalo, xa kugxininisa, iinkqubo zokubeka izinto, ukunyuswa kwama-carcinogen kunye namayeza amachiza awonakalisayo, zomeleleyo.
Abantwana abavela kwiminyaka emithathu bangabongeza ngokukhuselekileyo 1 ithisiponji yokutya kwengqolowa yokudla ekudleni - kwipilitri, iifatata ezifihliweyo, ushizi we-cottage, kwizikhethi zabo ezizithandayo. Kungcono ukuthenga ibhanti kwikhemisi, ukhethe ezo zinto zikhona izongezo zeberry. Kwaye, ke, akufuneki ukunyanzelisa le nyathelo, sifuna ukuchaneka nokuhamba ngokuthe gqolo. Inyaniso kukuba ngo-intake ye-bran, i-bloating mayesenzeka ngezinye izihlandlo. Kwiimeko ezinjalo kuyimfuneko ukunika amanzi omdaka, anikwe umntwana usana. Yaye ukhumbule ukuba ukunyanya kwabantwana abanesondlo esifanelekileyo akunakunciphisa kuphela, kodwa banokuphumelela.
Yintoni enokuyenza xa umntwana edibanisa imini nobusuku
Indlela yokujamelana nemibonakalo yekinetosis kubantwana?
Ngaba ndingamnika umntwana i-valerian?
IiRicket zeZifo ezingenasifo
Iliso lomntwana lihla
Ukutya okukhawuleza, okulula kunye nokusebenza kakuhle
Izikhumba nge-lemon kunye ne-ginger
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngamaapulo?
Indlela yokuziphatha, ukuba awufuni ukuthetha nomfana kwakhona
Ndiyakuvuyisana noNyaka omtsha we-2017 osebenza nabo - Abemthethweni kunye nabahle banincoma kwindinyana nakwiprose. Iikopi zekhadi kubasebenzi oNyaka omtsha 2017 weCoca
Ama-pancakes aseKorea kunye no-anyanisi
I-Horoscope ngoFebruwari 2018 - I-Scorpiokazikazi-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Isibhengezo sokuqala samazwe ngamazwe kwintsimi yobuhle kunye nempilo "Ubomi" bubekwe kumboniso we-TOP LINE
I sandwich ne avocado
Buzova, shenxisa: u-Diana Shurygina urekhoda i-albhamu ye-solo
Mayelana neenzuzo ze-caviar ebomvu
Iipilisi zeParadesi ephakamileyo